माओवादीले तोक्यो ३२ विभाग र प्रतिष्ठानका प्रमुख, कसको भागमा के पर्यो ? — Sanchar Kendra
माओवादीले तोक्यो ३२ विभाग र प्रतिष्ठानका प्रमुख, कसको भागमा के पर्यो ?
काठमाडाै‌ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विभाग र प्रतिष्ठानको प्रमुखको टुंगो लगाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले ३२ विभाग र एक प्रतिष्ठानको नेतृत्व टुंगो लगाएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।